DAAWO: Gattuso oo caddeeyay kooxda uu shaksi ahaan taageero! (Waa middee?) – Gool FM
(Milano) 05 Abriil 2018 – Gennaro Gattuso aya sheegay in ay “sharaf u tahay” inuu qandaraas dheer la galo kooxda Milan, kaasoo soconaya ilaa 2021 isagoo ballan qaaday inuu sare u qaado kooxda Milan.
Macallinkan ayaa laga soo dallacsiiyay da’yarta Primavera kaddib markii la eryey Vincenzo Montella bishii Nofeember, rikoodhkiisa Serie A ayaana aad u wanaagsan isagoo la kulmay 3 guuldarro, 9 guul iyo 4 barbarro.
“Aad baan ugu faanayaa waqtiga ii gaarka ah,” ayuu Rino saxaafadda u sheegay kaddib markii uu qandaraaska saxiixay.
“Haatan safarka waa inaan sii wadnaa. Waxaan ballan qaadayaa inaan Milan dib ugusoo celiyo booskeedii. Cadaadisyo badan baa jira, balse taasi i dhibi mayso, Milan waa kooxda aan taageero, sharaf bayna ii tahay inaan macallin u noqdo.” ayuu yiri.
''Haddii aan caddaan ahay mar horaa la i cafin lahaa'' - Mario Balotelli
GOOGOOSKA: Atletico Madrid vs Sporting 2-0, SS Lazio vs Salzburg 4-2